Bacela usizo abaphila ngokucela emgwaqeni | News24
Bacela usizo abaphila ngokucela emgwaqeni
INZIMA impilo kulabo abangenamakhaya abahlala emgwaqeni njengoba kuqhubeka ukuvalwa kwezwe okwesikhashana nosekusesigabeni sesise(Level 4) manje.
Balinganiselwa kwabangama-30 abantu abaphila ngokucela emgwaqeni nabangenamakhaya ababonakala njalo ngaphandle kwenxanxathela yezitolo i-Greater Edendale Mall becela nakuba loko kungukuphula imiyalelo kanye nemigomo yokuvalwa kwezwe (national lockdown).
Abanye balabantu ababonakala ngaphandle kwale nxanxathela yezitolo bathi akukho lapho bengaya khona njengoba ngesikhathi umasipala uMsunduzi uthatha abanye ubanikeza indawo abazohlala kuyona, batshelwa ukuthi kuthathwa labo akade behlala edolobheni kuphela. Seloku kwaqala ukuvalwa kwezwe ngenyanga kaNdasa (March) umasipala waqoqa laba abahlala emgwaqeni kodwa abanye bakhona kubikwa ukuthi sebeqile babuyela emgwaqeni njengoba bekhala ngokuthi abayitholi imithi yokuthi bakwazi ukuqhubeka nosuku ngaphandle kokugula.
Ngesikhathi bekhuluma ne-Echo ngaphandle kwenxanxathela yalezi zitolo laba bantu bathe bayazi ukuthi abakwenzayo kuwukuphula umthetho njengoba uMengameli wezwe uMnu Cyril Ramaphosa ayalela wonke umuntu ukuba ahlale ekhaya njengoba kusavalwe izwe okwesikhashana.
Bathe into ebenza ukuthi baqhinqe ngaphandle kwale nxanxathela yezitolo zonke izinsuku ingoba basuke befuna ukuthi bakwazi ukuthola into abazolala beyidlile ngoba indlala iyababulala njengoba bengasakwazi nokuqoqa amabhodlela kanye nezigubhu bayozidayisela kona nokuyinto abathi kade bephila ngayo.
“Kunzima nathi lena indlela esizizamela ngayo ukuphila ayikho into esingayenza ngoba akukho lapho singaya khona.
Ukube kukhona lapho singaya khona sikwazi ukuthi silale sidlile angabe asikho lana. Siyazi ubungozi esikubona bokuthi singahle sitheleleke ngaleli gciwane ingako sizama ngayoyonke indlela ukuthi sizivikele ngokuthi sihleli sigeza izandla zethu ngamanzi kanye nensipho siphinde sifake nezimfonyo esizicela emtholampilo ngoba asinayo imali yokuzithenga,” kubeka omunye ongathandanga ukudalulwa igama lakhe.
Baqhube bathi umsebenzi wabo ukuthi bafike ekuseni basize abantu abasuke bephuma enxanxatheleni yezitolo ngaphakathi ngokubaphathisa izimpahla bese babanikeza leyomadlana encane.
“Asihluphi muntu siyazicelela nje kuphela ukuze sizokwazi ukuthi silale sidlile. Inkinga esinayo manje ukuthi sesibaningi kakhulu ngoba sekukhona nalabo akade behlala edolobheni abeqe endlini lapho kade beyinikezwe umasipala ukuthi bahlale khona.
“Nathi besingakujabulela ukuthi sihlaliswe endlini lapho sizokwazi ukunakekelwa khona singaloku siphula imithetho ngoba akulungile sifaka nabantu abaningi engcupheni. Sizicelela usizo nje kuphela ayikho enye into. Nami angithandi ukuba lana kodwa isimo esingiphoqayo,” kubeka omunye naye ongathandanga ukudalulwa.
Okhulumela umasipala uMsunduzi uNks Thobeka Mafumbatha uphikile ukuthi kukhona abantu abeqa ekhaya lapho kade bebekwe kulona umasipala wathi abahamba, bahamba ngoba bezicelela bethi banamakhaya abo.
“Indawo yokwamukela abantu abangenamakhaya isakhona kanti futhi ivulelekile kubona bonke labo abangenawo amakhaya akusikona ukuthi bekuthathwa labo akade behlala edolobheni kuphela. Sathatha ngisho abantu ababephuma ezindaweni ezifana neMbali kanye ne-Edendale. Kumanje sinabantu abangenamakhaya abangu- 219 esibathathile sayobabeka endaweni ephephile nalapho sibanikeza khona ukudla kanye nezinto abazidingayo. Kukhona ngisho abaphuma kwabezempilo ababanikeza imithi ukuthi bakwazi ukuphila kahle,” kubeka yena.
UNks Mafumbatha uthe labo abahamba ngoba bethi banamakhaya kodwa asebebonakala begcaluza emgwaqeni sekungumsebenzi wamaphoyisa ukuthi ababophe ngoba kusho ukuthi sebephula umthetho.
“ Ngesikhathi bethi bona banawo amakhaya abangabuyela kuwona, sasingeke sikwazi ukuthi sibaphoqe ukuthi bahlale. Umasipala usuyidlalile indima yawo ngokwemigomo yokuvalwa kwezwe ukuthi ibaqoqe. Abathi abanawo amakhaya indawo isakhona ivulelekile,” kubeka yena.